Finch bụ nnukwu nhọrọ ọzọ dị ka onye ahịa Twitter | Androidsis
Ụnyaahụ anyị mụtara nke ahụ Ewepụla Fenix ​​na Google Play Store ọ bịarutere Oke akara nke Twitter nyere iwu maka ndị ahịa ndị ọzọ niile nke netwọkụ mmekọrịta ya ama ama nke obere ozi. Dị ka ndị ọzọ, dị ka Falcon Pro, ndị ọrụ na-aga n'ihu na-eji ya agaghị enwe ike ịnweta mmelite ọzọ site na Ụlọ Ahịa Play na onye mmepụta ya na-enye ọbụna nhọrọ iji weghachite ndenye aha ngwa ahụ. Onye ahịa Twitter mara mma nke bụ nhọrọ kachasị mma na nke gọọmentị na nke anyị nwere ike tufuo ọ gwụla ma anyị chọtara ezigbo nnọchi.
Nke a nwere ike ịbụ Finch zuru oke. Ngwa nke na-abịa n'oge kwesịrị ekwesị ka ọtụtụ puku ndị ọrụ na-achọta onwe ha na-enweghị ụlọ nke Fenix ​​​​bụ, nwere ike ịga n'ihu na omume ọma na uru ya. Onye ahịa Twitter ọhụrụ na mgbe a na-emelite ya n'ime afọ abụọ na-esote, oge nke ngwa nke ụdị a na àgwà dị elu na-erute ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke tokens, nwere ike ịghọ ọkacha mmasị nke na-enyere anyị aka ịṅa ntị na ndepụta, tweets. , retweets na kwuru na anyị na-achọta site na netwọk mmekọrịta a. Otu n'ime àgwà ya kachasị mma bụ na ọ nwere onwe ya kpamkpam, ya mere, enweghị mgbasa ozi in-app. Ma ndị a abụghị nanị àgwà ọma ya.
1 Ihe kacha mma dochie Fenix
2 Ma olee ihe ọzọ o nwere?
Ihe kacha mma dochie Fenix
N'oge na-adịbeghị anya, iji chọta ezigbo onye ahịa Twitter, ị ga-akwụ ụgwọ ụfọdụ euro iji nweta ezigbo nhọrọ. Na Finch anyị na-echefu banyere compost ma anyị na-aga ozugbo na ngwa nke kachasị mma maka Fenix. Yabụ ọ bụrụ na ịchọta onwe gị na-agbalị ịchọta otu mgbe ịmara na ọ gaghị enweta mmelite ọ bụla, gaa na nke ahụ.
Ọ na-agụ dị ka àgwà ọma kacha mma otu Ihe Design interface, mfe ịnweta usoro iheomume, ozi na ndepụta n'etiti ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ. N'ime ihe eji eme ihe ị nwere ike iji isiokwu abụọ, otu ọkụ na nke ọzọ gbara ọchịchịrị, yana ịkọwapụta nhọrọ ịbawanye nha font dịka otu n'ime njirimara ya kachasị mma na nhazi.
N'ịbụ onye nọ na ngwa Google na ụlọ ahịa egwuregwu vidiyo maka izu ole na ole, anyị na-eche ngwa ngwa ihu anyị ga-ahụ n'ezie ụdị ọhụrụ n'ọdịnihu nke ahụ ga-agba ume na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ na-aga ịwụnye n'ime ụbọchị na-abịanụ, ebe ọ bụ na ọ ghọọla ngwa mara mma. Naanị ihe nwere ike ịta ụta bụ nke a, enweghị nhọrọ maka nhazi.
Ma olee ihe ọzọ o nwere?
N'ịbụ ihe Kere ihe o nwere nke ahụ akụkụ igodo ụzọ, ebe anyị ga-ahụ edemede kachasị mkpa, na taabụ atọ anyị nwere ike ịnweta site na ngwa ngwa ngwa ngwa, dị ka ụlọ, ọnọdụ na ozi.
Ka ị na-agagharị na usoro iheomume, ọtụtụ bọtịnụ FAB na-ese n'elu mmiri nke na-eduga anyị ide tweet ozugbo, gaa ozugbo na kwuru ma ọ bụ gaa n'elu mgbidi ịchọta ozi ọhụrụ ezigara ndị ọrụ anyị na-eso. Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na enwere ike gbanwee nha nke bọtịnụ ndị a, ebe ọ bụ na ha na-eburu nnukwu ohere nke a pụrụ iji mee ihe n'ụzọ ka mma.
Otu n'ime nkwarụ bụ nke ahụ njikọ mepere na ngwa kama ihe nchọgharị ahụ ma ị nweghị nhọrọ maka ya. N'ebe a, anyị na-atụ uche na enwere ike ịmekọrịta mmekọrịta na-akpaghị aka ma ọ bụ aka ya dabere na njikọ anyị nọ na ya, mana dịka m kwuru, ọ ga-abụ ihe gbasara mmelite ọhụrụ.
Otu n'ime àgwà ọma ya bụ interface nke ngwa ahụ Ọ na-agbasa nke ọma dabere na ngwaọrụ ị na-eji, ma mbadamba ma ọ bụ smartphone. Ọ na-enyekwa nkwado maka ọtụtụ profaịlụ na ọ bụ ezie na anyị na-atụ uche wijetị dị mma, ọ nwere ọtụtụ nhọrọ maka ọkwa.
una ezigbo ngwa iji were izu na Play Store nke, na mbata nke puku kwuru puku ndị ọrụ maka ụbọchị ole na ole sochirinụ, anyị ga-ahụ ụdị ọhụrụ nwere atụmatụ ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Finch bụ ezigbo ihe ọzọ dị ka onye ahịa Twitter iji dochie Fenix
Gafe Animal na Fire Emble bụ egwuregwu vidiyo abụọ ọzọ na-esote Nintendo maka smartphones